San Francisco Marriott Marquis 'Drew Tenerio na-enweta nkwanye ugwu nke "Awards of Excellence" nke Marriott International
Home » Akụkọ onyinye njem » San Francisco Marriott Marquis 'Drew Tenerio na-enweta nkwanye ugwu nke "Awards of Excellence" nke Marriott International
San Francisco Marriott Marquis, ụlọ oriri na ọ iconụ Southụ South nke Market, nwere obi ụtọ ịkpọsa na onye ọrụ ya ogologo oge, Drew Tenerio, bụ otu n'ime naanị ndị ọrụ Marriott International dị iche iche gburugburu ụwa iji nweta onyinye J. Willard Marriott nke Ọkachamara (AOE) na Marriott International Awards na-eme kwa afọ Awards nke kacha mma gala emere na nso nso a na Washington, DC. Kemgbe e kere ya na 10, Marriott International's Awards of Excellence mmemme kwanyegogoro ndị ọrụ kachasị ama nke ụlọ ọrụ ahụ maka mmezu ha, njirimara, nraranye, mbọ na nnọgidesi ike ha.
Onye isi njikwa San Francisco Marriott Marquis, Mike Kass kwuru, sị, “Drew bụ ọbịa ile ọbịa nke ọma. "Ọ bụ ahụkebe ọrụ na ụlọ ọrụ na-akwado ndị nwere n'ezie mmụọ na-eje ozi na anyị bụ ndị mere kechioma inwe ya na anyị otu."
Tenerio malitere ọrụ ya na Burlingame Marriott Hotel na 1986 dị ka ihe nkesa ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. N'ime afọ 33 gara aga, ọ rụrụ ọrụ maka ụlọ nkwari akụ Marriott iri na abụọ ma nọrọ na San Francisco Marriott Marquis kemgbe 1999.
Tenerio bụ onye na-akwado nkwado obodo. Na mgbakwunye na ịnata Award ya nke kacha mma site na Marriott, Tenerio ejirila Volunteer Center nke SF kwanye ugwu nsọpụrụ nke Community Community site na Littleest Friends of the Elderly. Ọ na-ewepụta onwe ya maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abụghị ndị ọrụ, gụnyere St Anthony's Dining Room, Children's Miracle Network, Project Open Hand, Project Homeless Connect, Coastal Cleanup, Salvation Army na Hotel Heroes.
“Nye ndị ọbịa anyị, ọ bụ onye nnọchianya nke ile ọbịa; nye ndị ọrụ ibe ya ọ bụ enyi na onye nlereanya; ndị obodo, ọ bụ onye na-enye ihe n'ụzọ dị ịrịba ama, "ka Kass kwuru. "Ọ na-anọchi anya ụkpụrụ ndị bụ isi nke ika ahụ: ibute ndị mmadụ ụzọ, ime ihe n'iguzosi ike n'ezi ihe, ịnakwere mgbanwe, na ịchụso ịdị mma."